သံဗုံးတီးတဲ့ သူရဲကောငျးပွညျသူပွညျ သားတှအေတှကျ အားတကျစရာ သ တငျးကောငျးလေးတဈခုကို ပွောပွ လာတဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး – XB Media Myanmar
ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျနတေဲ့ အဆိုတျောဖွူဖွူကြျောသိနျးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေး မူကို တဈခဲနကျရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူမဟာ ဝတျစား ဆငျယဉျမှုတှကေလညျး တခွားသူတှနေဲ့ မတူတဲ့ အမိုကျစားဖကျရှငျ တှကေိုပဲအမွဲ ဝတျဆငျ တ တျ တဲ့ သူပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိ ဖွူဖွူကြျောသိနျး က အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျ လကျ လုပျကိုငျနပွေီး အကောငျးဆုံး လြှောကျလှမျးနတော ဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောလညျး အမှနျတရားကို လိုလားကွတဲ့ ပွညျ သူပွညျသားတှနေဲ့ အတူ တဈသားတညျး ရပျတညျပေးခဲ့တာကို တှမွေ့ငျရပါတယျ။ ယခုမှာတော့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး က သံဗုံးတီးတဲ့ သူရဲကောငျး ပွညျသူပွညျသားတှအေတှကျ စိတျခှနျအားဖွဈ စေ မယျ့ သတငျးကောငျးကို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ “ဖွူဖွူတို့မွနျမာပွညျသူသံဗုံးတီး သူရဲကော ငျး တှအေတှကျအားတကျစရာသတငျးကောငျးလေး တဈခုပါ…….
လှနျခဲ့တဲ့ (၃) ပတျကြျောလောကျကတညျးက အရှတေိ့မောနိုငျငံ သမ်မတဟောငျး ငွိမျးခမျြးရေး နိုဗယျဆုရှငျ Mr. Jose Ramos-Horta ကစတငျပေးခဲ့တဲ့ potsandpansforMyanmar ကနျပိနျးကိုခုဆိုရငျ ASEAN နဲ့ International ကအထငျကရပုဂ်ဂိုလျနဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှကေပါ ပါဝငျအားဖွညျ့ပွီးမွနျမာပွညျသူတှနေဲ့အတူရပျတညျပေးနပေါပွီ ​Facebook နဲ့ Twitter ကသူ တို့သံဗုံးတီးနတေဲ့ ဓာတျပုံနဲ့ linkလေးတှကေိုကြေးဇူးတငျစှာနဲ့ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ..
..ဖွူဖွူတို့တှေ potsandpansforMyanmar လို့ search လုပျပွီးမိတျဆှတှေကေိုကြေးဇူးတငျ ကွောငျးသှားပွောကွရအောငျလား” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ ကဲ..ပရိသတျကွီးရေ သံ ဗုံး တီးတဲ့ ပွညျသူပွညျသားတှေ အတှကျ ဖွူဖွူရဲ့ သတငျးကောငျးလေးကို ပွနျလညျဖျောပွ ပေး လိုကျ ပါတယျ။
ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ပရိသ တ်တွေရဲ့ အားပေး မူကို တစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါ တ ယ်။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ ဝတ်စား ဆင်ယဉ်မှုတွေကလည်း တခြားသူတွေနဲ့ မတူတဲ့ အမို က် စား ဖက်ရှင် တွေကိုပဲအမြဲ ဝတ်ဆင် တ တ် တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ဖြူ ဖူကျော်သိန်း က အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက် လက် လုပ်ကိုင်နေပြီး အကော င်းဆုံး လျှောက်လှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း အမှန်တရားကို လိုလာြး က တဲ့ ပြည် သူပြည်သားတွေနဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပေးခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရ ပါ တယ်။ ယခုမှာတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း က သံဗုံးတီးတဲ့ သူရဲကောင်း ပြည်သြူ ပည်သားတွေအတွက် စိတ်ခွန်အားဖြစ် စေ မယ့် သတင်းကောင်းကို ပြောပြလာ ခဲ့ပါတယ်။ “ဖြူဖြူတို့မြန်မာပြည်သူသံဗုံးတီး သူရဲကော င်း တွေအတွက်အားတက်စရာ သ တင်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ…….
လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) ပတ်ကျော်လောက်ကတည်းက အရှေ့တိမောနိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် Mr. Jose Ramos-Horta ကစတင်ပေးခဲ့တဲ့ potsandp ansforMyanmar ကန်ပိန်းကိုခုဆိုရင် ASEAN နဲ့ International ကအထင်ကရပုဂ္ဂို လ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကပါ ပါဝင်အားဖြည့်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ အတူရပ် တ ည်ပေးနေပါပြီ ​Facebook နဲ့ Twitter ကသူ တို့သံဗုံးတီးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ linkေ လးတွေကိုကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
..ဖြူဖြူတို့တွေ potsandpansforMyanmar လို့ search လုပ်ပြီးမိတ်ဆွေတွေ ကိုကျေးဇူးတင် ကြောင်းသွားပြောကြရအောင်လား” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါေ သး တ ယ်။ ကဲ..ပရိသတ်ကြီးရေ သံ ဗုံး တီးတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက် ဖြူ ဖူ ရဲ့ သတင်းကောင်းလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေး လိုက် ပါတယ်။
လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနေ တှေ ကို အမိအရရိုကျကူးနကွေတဲ့ သတငျးမီဒီယာသမားတှအေန်တရယျကငျးဖို့ဆုတောငျးပေးနတေဲ့ နနျးဆုရ တီစိုး